‘म यो घोषणा गर्न चाहन्छु कि दाङको समृद्धिको नेतृत्व अब म गर्नेछु : कृष्णबहादुर महरा — Chetana Online
‘म यो घोषणा गर्न चाहन्छु कि दाङको समृद्धिको नेतृत्व अब म गर्नेछु : कृष्णबहादुर महरा
कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार
–दाङमा धेरै सम्भावना छ तर यहाँको विकास गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच भएको नेता भएन भन्ने दाङबासीको गुनासो दैनिकजसो सुन्ने गरिएको छ । अब म त्यसको पूर्ति गर्नेछु । म जति बाँच्छु– दाङकै विकासमा समर्पित हुनेछु ।
–दाङ प्रादेशिक राजधानी मेरो सपना हो । यसका लागि मैले सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराइसकेको छु, राजधानी घोषणा मात्र हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मैले सपनाकै रुपमा लिएर अघि बढाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेर स्थापनाको तयारीमा छ ।
–म अर्थमन्त्री भएको बेला दाङमा पाँच अर्ब बढी बजेट राख्न सफल भएँ । त्यतिबेला दाङको सडकमा ७७ करोड मात्र बजेट रहेछ, त्यसलाई झण्डै पौने तीन अर्बमा पु¥याएँ । मैले के गरें भन्ने मैले आफै भन्ने भन्दा पनि दाङबासीले नै बढी थाहा पाएका छन् ।
–चुनावपछि सरकार बनाउँछौं र लगत्तै पार्टी एकता गर्छौं । यो समीकरण फेरिएको मात्र होइन, पूरै राजनीति नै फेरिएको हो ।
संविधान मात्र लागु गर्न सकियो भने पनि जनताको अवस्था पूरै नयाँ ठाउँमा पुग्नेछ । त्यसैले हामी यो संविधानको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं । यसका लागि पनि बाम गठबन्धनले जित्नैपर्छ ।
चुनाव प्रचार उत्कर्षमा पुगेको छ, तपाईको क्षेत्रको चुनावी माहोल कस्तो छ ?
२१ गते हुने निर्वाचन चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । आज सोमबार रातको १२ वजेदेखी मौन अवधि सुरु हुदैछ । अहिलेसम्म मैले मेरो क्षेत्रका करिब एक सय चुनावी सभालाई सम्बोधन गरें । त्यहाँ जनताको बाक्लो उपस्थिति पाएँ ।
मलाई अनौपचारिकरुपमा भेट्न चाहने र मतदानको प्रतिबद्धता जनाउनेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । विहान ५ देखि राति १० बजेसम्म यो क्रम चल्ने गरेको छ । जनताको उत्साहले मलाई सोचेअनुरुप नै उत्साहित बनाएको छ । मैले समुदाय, बस्ती र टोलमै पुगेर पनि मतदाता भेटेको छु । मतदाता निकै उत्साहित छन् ।
समग्रमा दाङको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
दङ्गाली जनतामा निर्वाचनको उत्साह निकै बढेको छ । जिल्लाभर नै घरदैलो अभियान, चुनावी सभा र कार्यकर्ता भेटघाट चलिरहेकाले समग्रमा दाङ जिल्ला निर्वाचनमय भएको छ । जनताको उत्साहले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।
म प्राविधिकरुपमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार भए पनि राजनीतिकरुपमा जिल्लाभरिकै मतदाताले मबाट धेरै आशा गरेको पाएँ । दाङबासी जनताले मबाट धेरै अपेक्षा गरेकाले मलाई पनि थप उत्साहित बनाएको छ र दाङका लागि देखिने गरी धेरै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएको छ ।
निर्वाचनको दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि जिल्लामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने अवस्था देखिएको छ । तुलसीपुरमा भएको दुखद घटनाले मलाई दुखित बनाएको छ, त्यसबाहेक अन्य कुनै घटनाबिना नै निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छु । त्यसका लागि सुरक्षा निकायको तदारुकता प्रशंसनीय छ ।
यहाँले २०४८, ०६४ र ०७० मा तीनपटक चुनाव जित्नुभयो, विगत र अहिलेको चुनाव प्रचारमा के भिन्नता रह्यो ?
विगतका निर्वाचनहरु जनताको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा केन्द्रित थिए । उतिबेला अधिकारप्राप्तिका एजेण्डा नै मुख्य थिए । संविधान जारी भइकेपछि अब जनताका न्यूनतम अधिकार संस्थागत भएका छन् । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन समृद्धि र विकासमा केन्द्रित छ । अब राजनितिक ‘डिबेट’ सकिएका छन् र राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ ।
अर्काे कुरा, पहिलेका चुनावको प्रचारशैली पनि फरक थियो । अहिले त्यो पनि फेरिएको छ । प्रचारका नाममा तडकभडक विस्तारै कम हुँदै गएका छन् । हामीले लामो लडाइ लडेर ब्यवस्था परिवर्तन ग¥यौं, त्यसको परिणाम पनि देखिन थालेको छ । धनपैसा नहुनेहरु पनि चुनाव लड्ने स्थिति बन्दैछ । यसलाई अझै सुधारेर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।
चुनाव प्रचारमा प्रत्येक गाउँ–गाउँ, घरघरमा पुग्नुभयो, खासमा जनताका समस्या के–कस्ता रहेछन् ?
दाङका समस्या थुप्रै छन् । शुद्ध खानेपानी पुग्न सकेको छैन । कतै बाटो घाटो नै छैन । खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । सिचाइ अभाव बढ्दैछ । तमाम समस्याहरु जीवितै छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट बनाउनुपर्ने ठूला योजना शुरु नै भएका छैनन् । मसिनो गरी केलाउने हो भने मतदाताले आफ्ना वरिपरिका धेरै समस्या उठाउँछन् तर समग्र निर्वाचन क्षेत्र र अझ जिल्लाका सबै मतदाताले समानरुपमा उठाउने मुद्दा भनेका प्रदेश राजधानी र समृद्धिको हो ।
बाहिर केही मतदाताले चुनाव जितेपछि महरा दाङमै रहन्छन्, रहँदैनन् भनेर पनि प्रश्न गर्ने गरेका छन्, यो प्रश्न मतदाताले कत्तिको उठाए ?
यो प्रश्न स्वाभाविकरुपले उठेको छ । मैले धेरै ठाउँमा राखि नै सकें, म अब दाङकै सेवामा समर्पित हुनेछु । मलाई दाङवासीले यति धेरै माया गरेका छन्, यसको गुण जीवनभर म दाङमै बसेर तिर्नेछु । म यो पनि घोषणा गर्न चाहन्छु कि दाङको समृद्धिको नेतृत्व अब म गर्नेछु ।
दाङमा धेरै सम्भावना छ तर यहाँको विकास गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच भएको नेता भएन भन्ने दाङबासीको गुनासो दैनिकजसो सुन्ने गरिएको छ । अब म त्यसको पूर्ति गर्नेछु । म जति बाँच्छु– दाङकै विकासमा समर्पित हुनेछु ।
कतिपय आफ्नो एजेण्डा नभएका छुद्र व्यक्तिहरुले मलाई दाङ र रोल्पासँग जोडेर प्रचार गर्ने गरेको पनि मैले सुनें । म तपाइँलाई एउटा पक्ष बताउँ, म यहाँ चुनाव लड्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी माओवादी र गठबन्धन बनिसकेपछि एमाले नेता कार्यकर्ताको त जोड थियौं नै, कांग्रेसमा आस्था राख्ने थुप्रै व्यक्ति र सामाजिक क्षेत्रमा नेताहरु मलाई काठमाडौंमा महिनौंदेखि भेटेर तपाइँ अब दाङबाटै चुनाव लड्नुपर्छ र दाङलाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो । नभन्दै म आएपछि उहाँहरुको ठूलो सद्भाव पाएको छु । अन्य विचार राख्ने धेरै साथीहरुले समूह बनाएर र व्यक्तिगत रुपमा मेरो छुट्टै प्रचार पनि गरिराख्नुभएको छ ।
यसलाई मैले दुई अर्थमा लिएको छु । एउटा त दाङवासीले यति धेरै माया गर्नुको पछाडि म दाङवासीसँगै थिएँ र उहाँहरुले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको रहेछ भन्ने लागेको छ । त्यस्तै मलाई अब दाङवासीले टाढा जान दिंदैनन् भन्ने सन्देश पनि हो ।
जहाँसम्म रोल्पासँग जोडेर गरिने प्रचार छ । म रोल्पामा जन्मिएँ, दुईपटक रोल्पाबाट चुनाव जितें र एकपटक दाङमा जितें । अहिले दोस्रोपटक दाङमा चुनाव लड्दैछु । म उमेरले साठी पुग्न थालेको र देशको एक जिम्मेवार नेता हुँ, मैले कहिल्यै छलढाँटको राजनीति गरेन र भोटका लागि जे पनि गर्ने मेरो प्रवृत्ति होइन ।
त्यसैले म अब दाङको समृद्धिमा समर्पित भएको घोषणा गरिसकेपछि मलाई टाढा धकेल्न खोज्नुको कुनै औचित्य छैन, जहाँसम्म मलाई माया गर्ने साथीहरुले उठाएको चिन्ताको बिषय छ, यसमा पनि निकै गम्भीर छु र त्यो ब्यवहारबाटै देखाउने छु ।
चुनाव प्रचारका लागि अन्य दलसम्बद्ध मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
केही त माथि पनि भनें, धेरै राम्रो पाएको छु । कतिपय साथीले मलाई सोध्छन्– तपाइँ भाषण गर्दा प्रतिष्पर्धी दल र उम्मेदवारको किन बिरोध गर्नुहुन्न ? एक त यो मेरो प्रवृत्ति होइन, दोस्रो कुरा तपाइँको प्रश्नसँग पनि सम्बन्धित छ ।
मलाई अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले समेत ठूलो आशा गरेकाले र उनीहरु समेत मतदानका लागि तयार भइसकेकाले म त साझा उम्मेदवारजस्तो भइसकें । खासगरी परिवर्तन रुचाउने, मेरो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको उपयोग गरेर दाङको समृद्धि गर्न चाहने र दाङलाई प्रदेश राजधानी चाहने सबै विचार र दलसँग आस्था राख्ने साथीहरुको मलाई समर्थन छ ।
तपाइँले दाङमा जित्ने आधार के–के हुन् ?
जित्ने आधारहरु पनि थुप्रै छन् । पहिलो कुरा त मप्रति विश्वास गर्नेहरुको संख्या निकै ठूलो छ, यही मेरो जित्ने आधार हो । म ०६४ साल निर्वाचन दाङबाटै लडेको हुँ । म दाङबासीको सेवा र विकासका लागि निरन्तर लागेको छु । तपाइँले पछिल्ला केही काम हेर्नुभयो भने पनि मेरो अनुरोध अस्वीकार गर्ने कम छन् ।
दाङ प्रादेशिक राजधानी मेरो सपना हो । यसका लागि मैले सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराइसकेको छु, राजधानी घोषणा मात्र हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मैले सपनाकै रुपमा लिएर अघि बढाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेर स्थापनाको तयारीमा छ ।
म अर्थमन्त्री भएको बेला दाङमा पाँच अर्ब बढी बजेट राख्न सफल भएँ । त्यतिबेला दाङको सडकमा ७७ करोड मात्र बजेट रहेछ, त्यसलाई झण्डै पौने तीन अर्बमा पु¥याएँ । मैले के गरें भन्ने मैले आफै भन्ने भन्दा पनि दाङबासीले नै बढी थाहा पाएका छन् ।
यी प्रायः काम म यहाँको जनप्रतिनिधि नभएको बेला गरेका काम हुन् । अब यहीको जनप्रतिधि भएपछि महराले योभन्दा बढी नै गर्छ भन्नेमा दाङवासी ढुक्क छन्, यही नै मेरो जीतको आधार हो ।
चुनाव जितिसकेपछि गर्ने कामको केही सूचि बनाउनुभएको छ ?
मैले प्रतिबद्धता पत्रमा विस्तृतरुपमा उल्लेख गरेको छु । सबैभन्दा पहिले हामी एउटा विज्ञहरुको टीम बनाउने छौं । त्यसले बिषयगत योजना बनाउने छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाएर हामी अघि बढ्नेछौं ।
दाङको समृद्धिका लागि मैले तीनवटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने सोंच बनाएको छु । भूमिको उचित ब्यवस्थापन गरी सिंचाइको प्रबन्ध गरेर कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने मात्र होइन, दाङ कृषि क्षेत्रलाई देशकै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउने गरी अघि बढाउने मेरो योजना छ ।
देशकै आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण जिल्ला दाङ बनाउने मेरो योजना छ । सिंचाइ र खानेपानी सुविधा दाङको ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको छ । अल्पकालीनरुपमा खोलामा हाइड्याम तथा दीर्घकालीनरुपमा डाइभर्सनबाट दाङमा पानीको आपूर्ति गर्ने योजना बनाइने छ ।
त्यस्तै यातायात सञ्जाल यहाँको दोस्रो महत्वपूर्ण काम हो । कोइलाबास–लमही–घोराही–सहिदमार्ग–डोल्पा सडकलाई पूर्णता दिएर भारतदेखि चीन जोड्ने र दाङलाई त्रिदेशीय ट्राञ्जिट प्वाइन्ट बनाउने हाम्रो योजना अघि बढिसकेको छ ।
त्यस्तै, घोराही–मुर्कुटी–प्युठान–अर्घाखाँची–पाल्पा–पोखरा सडक निर्माण गरेर प्रदेशका सबै जिल्लाको पहुँच प्रदेश राजधानीमा विस्तार गर्ने र चार नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीसँग कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना छ । त्यस्तै तुलसीपुर–सुर्खेत–जुम्ला सडकलाई पूर्णता दिएर ६ नम्बर प्रदेशसँग जोड्ने योजना छ ।
हामीले अब रेलको पनि सपना देख्न थालेका छौं । केरुङबाट लुम्बनीसम्म रेल आउने नै भयो, यसलाई दाङ हुँदै महेन्द्रनगर र दाङ हुँदै रारा जोडेर केरुङबाट आएको रेल रारा हुँदै पुनः चीनतिर जाने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने भयो भने दाङको कायापलट हुनेछ । यद्यपि यो दीर्घकालीन योजना हो, अहिले नै शुरु नहुनसक्छ । यसबाट दाङलाई पश्चिम नेपालको पर्यटनको हब पनि बनाउन सकिन्छ ।
तेस्रो कुरा, अब भौतिक विकाससँगै जनताको आर्थिक, सामाजिक अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि हामीले समाजवादी राज्यसत्ताको कुरा गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सबै वर्गका जनताको पहुँच विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाएर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, असक्तहरुको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व बढाएर लैजाने बिषयमा हामी अब योजनाबद्धरुपमा नै अघि बढ्नेछौं । समग्रमा दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने र राजधानी भन्नलायक कसरी बनाउने भन्ने नै मेरो योजनाबद्ध अभियान हुनेछ ।
अन्त्यमा एउटा राजनितिक प्रसंग । पुरानो समीकरण तोडेर नयाँ समीकरणमा जानुभयो । तपाइँहरुले नयाँ समीकरण बनाएर पनि परिवर्तनका अनुभूति दिन सक्ने आधार के ?
हाम्रो समीकरण मात्र होइन, पार्टी एकताकै तयारीमा छौं । हामीले साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका छौं । चुनावपछि सरकार बनाउँछौं र लगत्तै पार्टी एकता गर्छौं । त्यसकारण पहिलो कुरा त यो समीकरण फेरिएको मात्र होइन, पूरै राजनीति नै फेरिएको हो ।
अर्को कुरा, हामी यही संविधानबाटै धेरै परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्छौं । यो संविधानले प्रस्तावमा मात्र समाजवाद भनेको छैन्, धारा उपधारामा समेत त्यसको मर्मबोध हुने गरी ब्यवस्था गरेको छ । अधिकारको सवालमा यो निकै अब्बल छ । यही संविधान मात्र लागु गर्न सकियो भने पनि जनताको अवस्था पूरै नयाँ ठाउँमा पुग्नेछ । त्यसैले हामी यो संविधानको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं ।
यसका लागि पनि बाम गठबन्धनले जित्नैपर्छ । जसलाई यो संविधान मन परेको छैन, जनतको संघर्षको बेलामा लतारिएर यहाँसम्म आएका छन्, उनीहरुबाट संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
तपाइँले संकेत गर्न खोजेको जस्तो कतिपय सवाल छुटेका छन् र अपुग पनि छन् । त्यसलाई पनि हामी सच्याएर अघि बढ्ने छौं । नेपालमा कुन प्रणाली अत्यधिक जनताको पक्षमा हुन्छ, त्यसका लागि अघि बढ्न हामी तयार छौं । संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास हाम्रो मूल लक्ष्य हो । हाम्रो अबको राजनीतिक कार्यदिशा भनेको संविधान कार्यान्वयन र त्यसबाटै मुलुकको समृद्धि हो ।
प्रस्तुतिः नरेन्द्र केसी/गिरिराज नेपाली
प्रकाशित मिति: December 04, 2017